Akụkọ Bitcoin - Mụta ahia 2
Ntanetị Bitcoin News
Bitcoin na-ata ahụhụ rida n'okpuru $ 50k na-eso ọbara ọgbụgba n'ahịa ahịa
Egwuregwu Bitcoin (BTC) na-adịbeghị anya na-agba ọsọ karịa akara $ 50k pụtara na ọ ga-apụ apụ, n'ihi na mkpuchi ahụ dara n'okpuru ọkwa ọgụgụ isi na-achọsi ike, ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ altcoyins kwụlitere ma ọ bụ tinye ọkwa dị egwu, ebe ahịa mkpuchi na-agba mbọ idobe isi ya karịa ijeri $ 1.5. Nke ahụ kwuru, ọ dị ka ụnyaahụ […]
Tuzdee, Machị 2, 2021
Goldman Sachs Na-emegheghachi Tebụl Ya Cryptocurrency, dị ka Bitcoin na-alaghachi Bullish Steam
Reuters kọrọ, na Mọnde, na Goldman Sachs Group Inc. ka guzobeghachiri tebụl azụmaahịa mkpuchi ya, ebe azụmaahịa Bitcoin (BTC) na-ekpo ọkụ ọzọ. Belọ ọrụ ego ahụ a ma ama kwuru na tebụl ahụ “ga - amalite na - eme bitcoin ọdịnihu na ndị na - enweghị ike ibuga ahịa maka izu na - esote izu.” Banklọ akụ ahụ kwukwara na tebụl ga-ewere ọrụ (…]
Sọnde, Febụwarị 28, 2021
Nyocha ọnụahịa Bitcoin - February 28
Gbaso a bullish arụmọrụ na Saturday, Bitcoin (BTC) agbadala sharply n'okpuru $ 44k larịị. Ọdịda BTC na-adịbeghị anya dọkpụrụ ụlọ ọrụ altcoin tinyere, na-eme ka ọnụahịa ahịa cryptocurrency dum daa site na $ 120 n'ime awa ole na ole. Agbanyeghị, Bitcoin lọghachiri na ọkwa $ 45k n'oge oge pịa. Nke sị, Bitcoin si ahịa ekwu okwu na-aga n'ihu […]
Polkadot na Cardano Ga-akarị Bitcoin na Uru: FD7
Dubailọ ọrụ ntinye ego nke Dubai, FD7, kwenyere na uru Cardano (ADA) na Polkadot (DOT) ga-akarị nke Bitcoin (BTC) n'afọ ndị na-abịanụ. N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ ekwuputala na ọ ga-ewepụ ihe ruru $ 750 nde nke uru nke BTC ma mụbaa mgbasa ya na ADA na DOT. FD7 (Fall Down Asaa […]
Bitcoin Bụ Ọdịnihu nke Nchịkọta: Arcane Research
Dabere na akụkọ peeji 70 nke Arcane Research na njikọta na Bitstamp, Bitcoin (BTC) bụ ọdịnihu nke nkwa na ụlọ ọrụ ego. Nkwupụta ahụ na-ekwu na Bitcoin dị ka ịntanetị, na-eche na ọ bụ "akwa canvas" nke ndị mmepe nwere ike iwulite ihe okike n'ụzọ ọ bụla achọrọ. Na mbụ, Bitcoin […]
Bitcoin si ihu ala na-aga n'okpuru Pivot
Igodo Nguzogide 51500 - 5300 Nkwado Igodo: 44900 - 44000 Anya Ogologo Oge Bitcoin bụ ihe ịzụta ihe na-adịtụ adị. Gha swing trades megide ya bụ ajọ njọ n'oge gara aga maka ndị njikwa ego ole na ole. Ma anyị bụ ndị na-azụ ahịa ya mere na nke a apụtaghị na anyị enweghị ike irite uru site na ihu ala […]
Central Bank Ramps nke India na-ezube igbochi Cryptocurrencies na mba ahụ
Reserve nke Reserve Bank nke India (RBI) maka ụlọ ọrụ mkpuchi na-aga n'ihu na-eto ka ụlọ akụ kacha elu gosiputara nchegbu ya n'oge na-adịghị anya banyere mmetụta nke cryptocurrencies na akụnụba mba ahụ. N'otu oge ahụ, ndị otu ụlọ akụ ahụ kwadoro na RBI na-eme atụmatụ ịhapụ ụdị rupee dijitalụ. Lọ akụ nwere […]
Nyocha Ahịa Ahịa: Ego Atụmatụ Bitcoingwọ Ego Bitcoin N'okpuru $ 1 Ijeri
The "ọ dịghị ụbọchị na-agwụ ike ụbọchị na crypto" trope na-egosi na ha enwetala nkwado karịa oge 24 gara aga. Naanị awa ole na ole mgbe Bitcoin (BTC) dekọtara oge ọhụrụ dị elu na $ 58,480 ma yie ka ọ na-agbasiwanye ike n'ike n'ike ya, akara ngosi ego kristal wee nwee otu nke kachasị mma na ya […]
Mọnde, Febụwarị 22, 2021
You tinyewo ohere dị oke egwu nke ndụ gị niile?
Ọzọ "Buzz Okwu" AltcoinsLọnwa gara aga, Index Bloomberg Galaxy Crypto nọ na 1414.37, na-agbaso obere nke 217.82 na mbido Machị. BTC emeela akwa ọhụrụ ụnyaahụ na $ 51,630.86. Taa (Febụwarị 17) na ndeksi ahụ dị na 2,295.61. Nke ahụ bụ nnukwu uru maka otu ọnwa. Ka m tinye nke a n'echiche. Na ngwụsị […]
ohere itinye ego na ya
Mmelite na Cryptos
Sọnde, Febụwarị 21, 2021
Privatelọ ọrụ na-ahụ maka Jlọ ọrụ Jet nke UK Na-abawanye Eji Bitcoin mee dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ
Bitcoin (BTC) enwetala nkwanye ugwu dị ka usoro ịkwụ ụgwọ n'ime izu ole na ole gara aga, dịka ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị na UK, PrivateFly, na-akọ na ihe karịrị 20% nke ego ha nwetara sitere na ịkwụ ụgwọ Bitcoin. PrivateFly bụ ụlọ ọrụ ụgbọelu zuru ụwa ọnụ nke onwe ya na ndị otu a ma ama na ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọelu, gụnyere BACA, ACANA, na […]
Emelitere ikpeazụ: April 20th, 2020
75% nke akaụntụ CFD na-ere ahịa na-efufu ego